ချဲလ်ဆီးရဲ့နောက်မှာ ပြတ်မကျန်ခဲ့စေရန် ဇန်နဝါရီမှာ လီဗာပူးတို့ မဖြစ်မနေ အားဖြည့်သွားရမယ့် နေရာကို ထောက်ပြလိုက်တဲ့ ကော်လီမိုး - xyznews.co
ချဲလ်ဆီးရဲ့နောက်မှာ ပြတ်မကျန်ခဲ့စေရန် ဇန်နဝါရီမှာ လီဗာပူးတို့ မဖြစ်မနေ အားဖြည့်သွားရမယ့် နေရာကို ထောက်ပြလိုက်တဲ့ ကော်လီမိုး
စတန်ကော်လီမိုးက နာဘီကီတာရဲ့ ဒဏ်ရာ ပြသနာတွေဟာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်နေတာကြောင့် လီဗာပူး အသင်း အနေနဲ့ လာမည့် ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွေ့မှာ ကွင်းလယ်လူ တစ်ဦး မဖြစ်မနေ ခေါ်ယူသွားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ကစားသမားဟာ ဘရိုက်တန်နဲ့ ၂ ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ဒူးကောက်ကြော ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တာကြောင့် ပွဲချိန် မိနစ် ၂၀ မှာ အောက်စလိတ်ချိန်ဘာလိန် နဲ့ လူစားလဲခဲ့ရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ ကီတာဟာ ဖာဘင်ညို တီယာဂိုအယ်ကန်တာရာ ဂျိမ်းမီနာ ၊ ဟာဗေးအယ်လီယော့ တို့နဲ့ အတူ လီဗာပူးရဲ့ ဒဏ်ရာရ ကစားသမား စာရင်းထဲ ၀င်သွားခဲ့ပြီး ယာဂန်ကလော့ အနေနဲ့ ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ ရွေးချယ်စရာ လူတွေ နည်းပါးလျက် ရှိနေပါတယ်။ နာဘီကီတာဟာ အမြဲလိုလို ဒဏ်ရာ ပြသနာတွေနဲ့ ရုန်းကန် နေရသူ ဖြစ်တာကြောင့် လီဗာပူးဟာ လာမည့် ဇန်နဝါရီ စျေးကွက် ဖွင့်ချိန်မှာ ဒီပြသနာကို ဖြေရှင်းသွားဖို့ ရှိနေပြီး ကော်လီမိုးက အန်ဖီးကလပ် အနေနဲ့ ဇယားထိပ်မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ချဲလ်ဆီးရဲ့နောက်မှာ ပြတ်မကျန်ချင်ဘူးဆိုရင် ဒီနေရာကို မဖြစ်မနေ အားဖြည့်သွားရမယ်လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
ကော်လီမိုးက “ရိုးရိုးသားသား ပြောရမယ် ဆိုရင် နာဘီကီတာ နဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော် စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဒီရာသီ ကျွန်တော့်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ လူတွေဟာ နာဘီကီတာနဲ့ ပက်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ အတော်များများ မေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ လူတွေက ‘စတန်ရေ။ ငါတို့ နာဘီ့ကို ဝါဂွမ်းနဲ့ ထုပ်ပိုးထားရမှာလား?’ ‘စတန်ရေ..သူဟာ ဖန်ခွက်လိုပဲ’ ‘စတန်! သူဟာ ဒဏ်ရာ ပြသနာတွေကြောင့် လီဗာပူးမှာ လုံလောက်တဲ့ ပွဲကစားထားနိုင်ခြင်း မရှိဘူး’ လို့ လာပြောနေကြပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း သူ ဒဏ်ရာ ရသွားပြန်ပါပြီ။
လီဗာပူး ကွင်းလယ်ဟာ ဒဏ်ရာ ပြသနာတွေကြောင့် အခုဆိုရင် အတော် အားနည်းလျက် ရှိနေပါတယ်။ ‘ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ လီဗာပူးတို့ တစ်စုံတစ်ဦးကို ခေါ်ယူသွားဖို့ လိုအပ်နိုင်မလား?’ လို့ မေးမြန်းခဲ့မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် ကတော့ ဒါဟာ အမှန်ပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ လီဗာပူး အနေနဲ့ လက်ရှိမှာ ချဲလ်ဆီးနဲ့ ၃ မှတ်သာ ကွာဟနေပေမယ့် ဒီပြသနာကို မဖြေရှင်းခဲ့ဘူး ဆိုရင် ၆ မှတ် ၉ မှတ် ကွာဟ သွားတာမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အဖြစ် မခံလိုက်ပါနဲ့။” လို့ ပြောသွားပါတယ်။
ဘရိုက်တန်နဲ့ သရေကျခဲ့ပြီးနောက် ကလော့က နာဘီကီတာ အနေနဲ့ လာမည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ အန်ဖီးမှာ ကစားသွားရမယ့် အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်မှာ ပါ၀င်သွားဖို့ မရှိဘူးလို့ အတည်ပြုသွားခဲ့ပါတယ်။
ကလော့က “ဒူးကောက်ကြောမှာ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တယ် ဆိုပြီး သူ ကျွန်တော့်ကို ပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဒဏ်ရာ အတိမ်အနက် ကိုတော့ ကျွန်တော် မသိသေးပါဘူး။ စောင့်ကြည့်သွားရမှာပါ။ မနက်ဖြန် ဒါမှမဟုတ် သဘက်ခါမှာ စကန်ဖတ် စစ်ဆေးသွားမှာပါ။ အဲဒီနောက် ကျွန်တော်တို့ အတိအကျ သိရမှာပါ။ ဒူးကောက်ကြောမှာ တစ်စုံတစ်ရာ ခံစားရတဲ့ သူတစ်ဦး အနေနဲ့ လာမည့် ပွဲမှာ အဆင်သင့် ဖြစ်ဖို့ မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူ လာမည့် ပွဲမှာ ပါ၀င်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော် မမြင်မိပါဘူး။”
Previous Article ဇလာတန် ရဲ့ Record ည ၊ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဆုံကြမယ့် လန်ဒန်လေဒီများ ၊ ဘာဆာ ကို ပြန်ချင်သေးတဲ့ မက်ဆီ တို့နဲ့ . . . ဒီနေ့နံနက်အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
Next Article ယူနိုက်တက်ရဲ့ နိုင်ပွဲကို အချိန်ဆွဲခြင်းလို့ ခေါင်းစဥ်တပ်လိုက်တဲ့ အဘွန်လဟော်